IDijithali kunye neNdlela eNgqongileyo isebenze ngokungaphaya kweSitrato seNdabuko kunye neSitrato esiPhezulu ngexesha lobhubhane
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » IDijithali kunye neNdlela eNgqongileyo isebenze ngokungaphaya kweSitrato seNdabuko kunye neSitrato esiPhezulu ngexesha lobhubhane
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iintlanganiso • iindaba • abantu • Xanduva • Tourism • Iindaba zeWired Travel • Iindaba eziHlumayo zase-UK
Oku kukubona okubangel’ umdla kwindlela itekhnoloji esebenzayo ngayo- ngowona mbono ubanzi-yayikubude bobhubhane.
Itekhnoloji yeDijithali isebenze kumzi mveliso ngempumelelo ngakumbi kunokhetho lwemveli ngexesha lobhubhani we-Covid-19, ityhila uphando olukhutshwe namhlanje (ngoMvulo we-1 kaNovemba) yi-WTM yaseLondon kunye ne-Travel Forward.
Phantse ama-700 amagosa aphezulu aphuma kwihlabathi jikelele athatha inxaxheba kwiNgxelo yoShishino lwe-WTM kwaye bacelwa ukuba bahlele ukusebenza kakuhle koluhlu lwetekhnoloji kunye nemijelo. Phantse isiqingatha sesampulu (47%) sathi amajelo okuthengisa edijithali afana nokwenza ngcono i-injini yokukhangela, ukukhangela okuhlawulelwayo kunye nokuthengisa nge-imeyile bezisebenza kakhulu ngexesha lo bhubhani, nge-30% eyongezelelekileyo eyichaza njengesebenzayo. Yi-6% kuphela echaze ukuba ayisebenzi.
Ngokuchaseneyo, ngama-25% kuphela abalawuli abathi ii-arhente zokuhamba ezitalatweni eziphezulu zisebenze kakhulu ekuxhaseni ishishini labo ngexesha lobunzima, ngaphezulu kancinci (31%) besithi ziyasebenza kakhulu. Igcuntswana elikhulu (16%) lithe ii-arhente zasezitalatweni eziphezulu azisebenzi.
Ngokubanzi, amajelo asebenza ngokuthe ngqo kubathengi asebenze kakhulu ngexesha lobhubhane. Iziza zewebhu zebhrendi, ii-apps kunye namaziko oqhagamshelwano achazwe njengenyani okanye asebenza kakhulu ngaphezulu kwe-70% yesampulu, kunye nenani elizikhuphayo njengelingasebenziyo likwipesenti yedijithi enye.
Ngokwahlukileyo, amajelo eendaba emveli afana noshicilelo, iTV kunye ne-imeyile ethe ngqo bezisebenza okanye zisebenza kakhulu ngaphantsi kwe-50%, kodwa ipesenti ephezulu kakhulu - i-17% - iwachithile la majelo njengengasebenzi.
Kwenye indawo, abaphathi babuzwa ngokuthe ngqo malunga neendlela ezimbini zetekhnoloji zangaphambi kweCovid. Ilifu lalisebenza ngaphezu kwesiqingatha sesampuli (52%), nangona abathengisi befu kunye nabaphathi be-akhawunti baya kuba nomdla wokufumanisa ukuba kutheni i-one-in-teen icinga ukuba ifu ayisebenzi. Ngokufanayo, i-APIs - isofthiwe evumela ukuba iinkqubo ezimbini zidibanise omnye nomnye - zazisebenza ngaphezu kwesiqingatha sesampuli kodwa zingasebenzi kwi-8%.
Nangona kunjalo, elona nqanaba liqhuba kakubi yayiziibhanki zokulala kunye nabaqokeleli, nabangaphantsi kwesiqingatha (48%) besithi la mashishini ayenenkxaso ngexesha lobhubhane, elona nqanaba lokwamkelwa liphantsi kwalo naluphi na kuluhlu. Kwakhona, iqaqobana elibalulekileyo - i-13% - libahoye njengabangasebenziyo.
Ngokwahlukileyo, eyona meko ibalaseleyo yokusetyenziswa kwetekhnoloji yayilunxibelelwano, kunye nabasebenzi kunye nabathengi. Ngaphezulu kwe-80% yesampulu yathi ezi zixhobo zisebenza ngokufanelekileyo ukusetyenziswa kwangaphakathi, kunye ne-4% kuphela ethi ezi zixhobo zawa mfutshane. Ukusebenzisa itekhnoloji ukuthetha nabathengi bangaphandle kusebenze ngokufanelekileyo phantse kwabathathu kwabane (74%), kunye ne-6% kuphela enganelisiyo.
USimon Press, uMlawuli weMiboniso, i-WTM yaseLondon kunye ne-Travel Forward, wathi; “Oku kukubona okubangel’ umdla kwindlela itekhnoloji esebenzayo ngayo- ngowona mbono ubanzi-yayikubude bobhubhane. Ibonisa ukuba i-tech landscape isahlulwe ngobuchwephesha obuthile kunye/okanye amajelo angekakulungeli injongo kwaye ayasilela koko kufunekayo, ngelixa ezinye zibonakala zivela ngokuvunywa jikelele.
"I-WTM yaseLondon kunye nodade ogxile kubuchwephesha babonisa iTravel Forward bakhona ukunceda iinkampani zokuhamba ukuba zijonge ukuba loluphi uhlobo lwetekhnoloji eziludingayo kunye nokuba zisebenzisana nabani ukuze bakhe uhambo kwakhona."